Nhau - Zhengzhou FangMing Yakanyanya Kupisa Nyowani Zvishandiso Co, Ltd. - Rare-Earth oxide SS Ceramic Thermal Munda Inoshandiswa muSapphire Crystal Grower - Iyo chete nyanzvi Mugadziri ane yakazvimiririra pfuma kodzero yekugadzira patent.
Zhengzhou FangMing Yakanyanya Kupisa Nyowani Nyowani Zvinyorwa Co., Ltd. - Yakajairika-Pasi oxide SS Ceramic Thermal Munda Inoshandiswa muSapphire Crystal Grower - Iyo chete nyanzvi Mugadziri ane yakazvimiririra pfuma kodzero yekugadzira patent.
Safiri inowanzonzi corundum, uye chinhu chikuru chinonzi Al2O3. Iyo ine yakanaka optical, thermal, dielectric uye mechanical, nezvimwe zvinhu. Iyo multifunctional kristall zvinhu zvine yakanakisa nzwisisika zvivakwa.
Safira ine hunhu hwakajeka hwekuoma kwakanyanya, kupfeka kuramba, kugadzikana pakakwirira tembiricha nyika, yakanaka dielectric zvivakwa, mwenje mwenje kutumira uye zvichingodaro. Icho chinhu chakakosha chakakosha muindasitiri yemazuva ano. Parizvino, inoshandiswa zvakanyanya muLED, zvemagetsi zvemutengi, zviridzwa, indasitiri yemauto uye mimwe minda.
Huru nzira dzekugadzira dzesafiri imwe kristaro ndeyeKyropoulos nzira (KY), Vertical Horizontal Gradient Kutonhora (VHGF), kumucheto-kunotsanangurwa firimu-yakadyiswa kristaro kukura (EFG), kupisa nzira yekuchinjisa (HEM), inokonona nzira yekudzika (Bridgman), sol -gel dip unodziya nzira nzira Czochralski nzira) uye murazvo unyauka nzira (Verneuil nzira). Pakati pavo, iyo Kyropoulos nzira (KY) ndiyo inonyanya kufanira nzira yekukura kukuru kwekristaro, uye mutengo wekugadzira wakaderera, inova nzira inowanzo gadzirwa kumba nekune dzimwe nyika.
Kyropoulos (KY) nzira ndeyemhando yekristaro yekukura nzira iyo inogadzirwa ne kyropoulos kubva kuRussia kukura imwechete kristaro kubva kune yakanyungudutswa mvura. Iye zvino inoshandiswa zvakanyanya mukukura kwesafiri kamwe kristaro. Musiyano mukuru kubva kune dzimwe nzira dzekukura ndewekuti kune chikamu chikuru chemakristasi ari mukunyungudika mudanho rekutakura uye yakaenzana dhayamita nhanho. Nekuda kwehunhu hwayo hwekristaro mune iyo crystallization maitiro, makristasi anogona kukura kune imwe nhanho. Kana iyo tembiricha yakamisikidzwa mushe, iyo inoenderera makristasi emakristasi anogona kuitika pasina kudhonza mbeu kumusoro, uye iyo yose nzira yekukura inogona kupedzwa.
Zhengzhou Fangming yakanyanya tembiricha ceramic New Material Co, Ltd. murimi wekristaro. Mushure memakore maviri eR & D inoenderera, muna Chivabvu 2016, batch yeSS ceramic thermal field yeKY nzira 120 kg uye yepamusoro giredhi Sapphire murimi akabudirira kubudirira. Yakazoshandiswa zvakanyanya musafiri, laser kristal michero muChina inoshandisa, uye yakatumirwa kuRussia, USA nedzimwe nzvimbo, ndokuwana mukurumbira wakakwirira kubva kwavari.
Zvichakadaro Mu2016, Fangming NewM yaive ichizadza iyo yekupisa munda kune yesafire murimi kune yenyika patent hofisi. MunaJune, 2019, isu takawana yekugadzira patent yekukwirira-kuchena yttrium yakadzikama zirconia SS zvedongo yekupisa munda yeiyo yakanyanya-yakanyanya tembiricha yekristaro murimi. Iyo patent nhamba ndeye 201610274897.6. Kubva ipapo, Fangming NewM yakave yega nyanzvi yekugadzira ine yakazvimirira epfuma kodhi yekugadzira patent.
Iyo nyowani mhando ye ceramic thermal munda yakazvimiririra yakagadzirwa uye inogadzirwa neFangming NewM ine zvinotevera hunhu.
1. Pasi pevhavha uye mamwe ekudzivirira emuchadenga, tembiricha yekushanda yemunda unopisa unogona kusvika 2650 ℃.
2. Pasi pemhepo inovhara, pamusoro pe1800 ℃ nyika, okisijeni inosunungurwa panguva imwechete.
3. Nonotsa uye chengetedza hupenyu hwebasa rezvimwe zvishandiso zvesimbi mumunda wekupisa.
4. Kudzokororwazve kusimudza nekuunza pasi tembiricha yekushanda, hupenyu hwehupenyu hwekutenderera ndeye makore matatu, ichisimudza iyo yakapetwa ka6 yakareba kupfuura iya yesimbi inopisa munda.
5. semuenzaniso wemunda unopisa we120kg yegiredhi rekristaro, uchienzanisa nesimbi yekupisa simbi, iyo nguva yekukura inopfupikiswa ne25% uye simba rekushandisa rinochengetwa neinopfuura makumi mana muzana zvichienzaniswa neiyo yesimbi imwe.
6. Paza nepakati pebhodhoro rehukuru hwekristalo kukura munda unopisa uye uone yakakura-yakawanda kugadzirwa kwekristaro.
Ultra-yakakwira-tembiricha zirconia yakakosha zvedongo zvinhu uye zvigadzirwa, isu tinopa ese-anotenderera akasanganiswa mhinduro yeiyo Ultra-yakakwira-temp-tembiricha, kukwirira kwekupokana uye kukwirira kwenzvimbo yekushandisa mamiriro.
Zhengzhou Fangming Yakakwira-Temp Ceramic Nyowani Zvinyorwa Co., Ltd.
Wedzera: Shiqiao Viwanda Zone, Goutang Town, Xinmi, Henan, China
Nhare: + 86-371-69258566 (Fekitori) + 86-371-53393916 （Zhengzhou)
Fax: + 86-371-69258566 (Fekitori) + 86-371-53393916 （Zhengzhou)
Webhu: www.chinafmxc.com E-mail: sales@chinafmxc.com
Post nguva: Jan-01-2020